News under करोबार
सिंगटी हाइड्रोको आइपीओ रिजल्ट सार्वजनिक
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको साधारण सेयर(आइपीओ) बाडँफाँड भएको छ । निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक मेगा क्यापिटले आइपीओको बाडँफाँड गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिले आइपीओको रिजल्ट अनलाइन मिडियालाई दिनु मिल्दैन । आइपीओको रिजल्ट सिंगटी हाइड्रोको वेवसाइट,बिक्री प्रवन्धक मेगा क्यापिटलको वेवसाइट तथा सिडीएससीको मेरोसेयर तथा पछिल्लो समय सीडीएसएईले बनाएको...
फास्ट ट्रयाक विवाद :पचासौं अर्बका ठेक्कामा एउटामात्र ठेकेदार छान्नु स्वतःगलत थियो,भ्रष्टाचारको ह्वास्स गन्ध आउॅथ्यो
काठमाडौं &ndash; पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले लेखा समितिले फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न दिएको आदेश ठिक भएको बताएका छन्। शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत् उनले पचासौँ अर्बको ठेक्कमा एउटा मात्र ठेकेदार छान्नु गलत भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा जोठ दिएका हुन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा...
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य,कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ&ndash; नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा सामान्य बृद्धि भएको छ । सोमबार र मंगलबार लगातार दुई दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज ३०० रूपैयाँले बृद्धि भएको हो । आज &zwj;छापावाला सुन प्रतितोला ८६ हजार ९०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजाबी सुन पनि आज ८६...
फोर्डले सार्वजनिक ग¥यो नयाँ इकोस्पोर्ट एसई गाडी
काठमाडौं &ndash; छनोटको विस्तार र ग्राहकको चाहना र महत्वलाई विशेष ध्यानमा राखी फोर्डले नयाँ संस्करणको इकोस्पोर्ट एसई गाडी सार्वजनिक गरेको छ। जसको पेट्रोल भेरियन्टको मूल्य रु.४७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ। फोर्ड ईकोस्पोर्ट एसई नाम दिइएको यस नयाँ भेरियन्टमा डिजाईन संकेत अमेरिकी र युरोपेली कम्प्याक्ट एसयुभ लिइएको छ र यसमा...
काठमाडौं &ndash; ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदनको रेकर्ड ब्रेक भएको छ। इन्स्योरेन्सको प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार इन्स्योरेन्सको आईपीओमा १८ लाख चार हजार ६४८ जनाको आवेदन परेको छ। आईपीओ खरीदका लागि तीन करोड ८० लाख ५७ हजार ७१० कित्ता बराबरको आवेदन परेको छ। आईपीओमा आवेदन सर्वसाधारणलाई निष्काशनमा ल्याइएको ५९ लाख ४० हजार कित्ताको...
नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा समस्या,कारोबार तथ्यांक नै फरक देखियो
काठमाडौं - नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । साताको तेस्रो कारोबार नेप्सेको वेवसाइट र टिएमएसको वेवसाइटमा कारोबार तथ्यांक नै फरक देखिएको छ । कारोबार प्रणालीमा समस्यादेखिए पछि ब्रोकर कम्पनीबाट &lsquo;टिएमएस&rsquo; नामक सफ्टवेयर लिएर अनलाइन कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताहरु अलमलमा परेका छन् । अनलाइन कारोबार प्रणालीमा यस अघि पनि...
कालीमाटी तरकारी बजारमा कृषिमन्त्री अर्यालको अनुगमन
काठमाडौं - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्&zwj;माकुमारी अर्यालले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताएकी छन् । मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै किसानले पसिनाको उचित मुल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताइन् । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु...
सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं - सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला ९२ हजार १०० रुपैयाँ तोकेको हो । मंगलबार ९२ हजार ८ सय रुपैयाँमा छापावल सुन कारोबार भएको थियो । आजका लागि तेजावी सुनको भाउ प्रतितोला ९१ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको...
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्यारेन्सले आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारीमा
काठमाडौं - महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशनका लागि तयारी शुरु गरेको छ । मुलुकको सबैभन्दा कान्छो बिमा कम्पनी महालक्ष्मीले आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा लैजाने भएको हो । साधारणसभाले पारित गरेपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया शुरु हुनेछ । कम्पनीले फागुन ३ गते सोमबार होटल र्याडिसनमा साधारणसभा बोलाएको छ ।...
काठमाडौं &ndash; नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल&ndash;मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल&ndash;मट्टितेलको साबिक खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु दुईका दरले वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमको डिपो क्षेत्रको १५ किलोमिटर परिसरभित्रका लागि पेट्रोल तथा डिजेल&ndash;मट्टितेलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य क्रमशः ११०...
काठमाडौं &ndash; आज नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउ घटेको छ । आज एकै दिन सुन तोलामा सात सय रुपैयाँले घटेको हो । सुनको भाउ आज तोलामा ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, आज चाँदी पनि आज तोलामा ३० रुपैयाँले घटेर १२ सय...
बढ्यो सुनको मूल्य,कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ &ndash; नेपाली बजारमा आज पहेँलो धातु सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ८०० रूपैयाँले घटेकोमा आज ६०० रूपैयाँले बढेको हो । सोमबार प्रतितोला ९२ हजार २०० रूपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज ९२ हजार ८०० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९२ हजार ३०० रूपैयाँमा कारोवार भइरहेको नेपाल...
काठमाडौं &ndash; आज सोमबार सुनको मूल्य आठ सय रुपैयाँले सस्तो भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन आज ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन आज ९१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रतितोला कारोबार भएको छ। चाँदीको भाउ पनि आज प्रतितोला १२ सय ३० रुपैयााँमा कारोबार भएको...
सुन प्रतितोला २३ सयले घट्यो
काठमाडौं &ndash; सुनको प्रतितोला मूल्यमा एकै दिन ठूलो गिरावट आएको छ । शुक्रबारको तुलनामा सुनको प्रतितोला मूल्य २३ सयले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले आइतबारका लागि छापावल सुनको प्रतितोला मूल्य ९३ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । शुक्रबार ९५ हजार तीन सय रुपैयाँ छापावल सुन कारोबार...
आज १०० रूपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौँ - नेपाली बजारमा आज पहेंलो धातु सुनको मूल्य प्रतितोला १०० रूपैयाँले घटेको छ । छापावाला सुन बिहीबार प्रतितोला ९५ हजार ४०० रूपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज ९५ हजार ३०० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९४ हजार ८०० रूपैयाँमा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।...
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, आज कतिमा कारोवार हुँदैछ ?
काठमाडौं &ndash; सुनको मुल्यमा भारी गिरावट भएको छ । आज सुन तोलामा १३ सय रुपैयाँले सस्तिएको छ । बुधबार ९६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ बिहीबार ९५ हजार चार सयमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बिहीबारका लागि तेजाबी सुनको प्रतितोला भाउ ९४ हजार ९...
साढे ४ सय केजी प्रतिबन्धित मंगुर माछा बगरमा गाडियो
दाङ &ndash; ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले अवैध रूपमा भित्र्याइएको मंगुर माछा जफत गरी खोलाको बगरमा गाडेको छ। ईप्रका तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले बिहीबार बेलुकी ७ बजेपछि तुलसीपुर बजारबाट ती माछा नियन्त्रणमा लिएर पातुखोलामा लगी गाडेर नष्ट गरेको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित मोहन नेपालीले सञ्चालन...
८ सयले घट्यो सुनको भाउ,कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं - नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । आज सुन तोलामा ८ सयले घटेको हो । आइतबार स्थिर रहेको सुन सोमबार ७ सयले बढेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य ९४ हजार १ सय र तेजाबी सुनको मूल्य ९३ हजार ६०० कायम रहेको छ...
सुन तोलामा ९ सयले बढ्यो, कतिका कारोबार हुँदैछ ?
काठमाडौं &ndash; नेपाली बजारमा सोमबार सुन तोलामा ९०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासांघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलाको ९५ हजार २०० रपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सुन तोलाको ९४ हजार ३ सय रपैयाँ थियो । त्यसैगरी तेजावी सुन ९४ हजार ७ सय कायम भएको छ ।...
तोलामा ८ सयले बढ्यो सुनको भाउ
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले बढेको छ । बिहीबार ९३ हजार ५ सयमा कारोबार भएको छापावल सुनको भाउ बढेर ९४ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबारका लागि तेजाबी सुनको भाउ ९३ हजार ८५० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै चाँदीको...
जग्गा कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा खारेज
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 08th December 2020
काठमाडौं &ndash; सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय जारी गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि...
नेकपा नेता पुरीले थप १४ बिगाहा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेको भेटियो
झापा &ndash; झापा दमकका नेकपा नेता रेवतराज पुरी &lsquo;गगन&rsquo;ले थप १४ बिगाहा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेको भेटिएको छ। मंसिर ९ गते पुरी पक्राउ परेपछि थप १४ बिगाहा सरकारी जग्गा उनले आफ्नो नाममा राखेको देखिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। पुरीले १० बिगाहा आठ कठ्ठा सरकारी जग्गा कीर्तेपछि आफ्नो...
अवैध क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढ्यो
सुर्खेत । जिल्ला अनुगमन समिति सुर्खेतले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले निगरानी बढाएको हो । अनुगमन समितिले त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव...
काठमाडौं । कोरोनाको महामारीमा पनि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी ली. ले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको सूचांकमा प्रगति गरेको छ । कम्पनीले यस अवधिसम्ममा १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन...
अधिकांक्ष क्रसर उद्योग दर्ता बिनै संचालनमा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th November 2020
काठमाडौं । ३७ जिल्लामा रहेका २ सय ७९ क्रसर उद्योगमध्ये १ सय १ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मंगलबारसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार ३७ वटा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त क्रसर उद्योगको विवरणमध्ये कुल २ सय ७९ उद्योगमा १ सय १ वटा उद्योग विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th October 2020
काठमाडौँ : नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पिउने पानीको मूल्य समायोजन गरेको छ। बजारमा अधिकतम मूल्य ६० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको २० लिटर बराबरको जारको पिउने पानीको मूल्य घटाएर ५० रुपैयाँ कायम गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माताहतको वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण...
आजबाट दशैं–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल संचालनमा,कुन सामानमा कति छुट ?
काठमाडौं &ndash; अनलाइन अर्डरमार्फत पनि सामान किन्न सकिने गरी सरकारले आजबाट दशैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सन्चालन गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका देशभर रहेका कार्यालय, डिपो, डिलर तथा घुम्ती पसलमार्फत् सुपथ मूल्य पसल सुरु गरिएको हो । केही रुपैयाँ...
लुटेरै काठमाडौंमा किने ३६ आना जग्गा,प्लटिङमा पनि लगानी
काठमाडौं &ndash; खेलबहादुर तामाङ अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको हिरासतमा छन्। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका ३ का उनी गत शुक्रबार पक्राउ परेका हुन्। उनको समूहका अन्य ६ जना पनि पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले सस्तोमा डलर साटिदिने भन्दै लुटपाट गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले अहिलेसम्म कति जना लुटे भन्ने खुलेको छैन। उनीहरू...
कोरोना विरुद्ध रुसले बनाएको खोप नेपाल ल्याउने तयारी!
काठमाडौं - रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (आरडीआईएफ) र नेपालको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच दुई करोड ५० लाख डोज कोरोनाको खोप आपूर्ति गर्ने सहमति भएको छ । आरडीआईएफद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो खोप नेपालका ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्नेछ । खोप हाल तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणमा परीक्षणको क्रममा छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र सरकारले...
कामनपा उपभोक्ता हित समितिले गर्यो हरितगृह तरकारी बजारबाट ४२ बोरा प्याज जफत
काठमाडौं &ndash; काठमाडौं महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले तिनकुनेको एक तरकारी बजारबाट ४२ बोरा प्याज जफत गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । तीनकुनेको हरितगृह तरकारी बजारमा बिहीबार बिहान छड्के अनुगमन गर्दा व्यापारीले लुकाएर राखेको प्याज बरामद भएको हो । विशेष गौतमको पसलबाट २९ र उन्नत सब्जी भण्डारबाट १३ बोरा प्याज जफत गरेको...
कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारमा आपूर्तिमन्त्री भट्टको छड्के,कालोबजारी गर्ने ७ पसल सिल
काठमाडौं - उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कालीमाटी तथा बल्खु तरकारी बजारको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । प्याजको मूल्यमा चर्को कालाबजारी भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेपछि बुधबार बिहान छड्के अनुगमन गरिएको मन्त्री भट्टको स्वकीय सचिव हितेश ओझाले बताए । नचिनिने गरी बजार पुगेका मन्त्री भट्टले बल्खुका ७ वटा पसलमा प्याजको...
बढी मूल्यमा प्याज विक्री गर्ने एक व्यवसायी बल्खु बजारबाट पक्राउ
काठमाडौं &ndash; भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा बढी मूल्यमा किनबेच हुन थालेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा बुधबार बल्खु बजारबाट एक जना व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले सुनिल केसीलाई बढी मूल्यमा प्याज विक्री गरेको अवस्थामा फेला पारेर नियन्त्रणमा लिएको हो । टोलीले कानुनी कारबाहीका...
जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं &ndash; सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्&zwj;त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि...
सरकारले खुल्ला गर्यो जग्गा कित्ताकाट
काठमाडौं - सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा कित्ताकट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकी हुन । २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट,तोलामा कति घट्यो?
काठमाडौं &ndash; सुनको मूल्य सोमबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेर ९७ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ९८ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेर ९७ हजार चार...
ओम्नीसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं&ndash; सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभागले आफूसँग गरेको सम्झौलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने र कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भदौ १ गते दर्ता भएको...
अब सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको सेवा ब्रुनईबाट पनि
काठमाडौं &ndash; ब्रुनईको ख्यातिप्राप्त सियामली रेमिट्यान्स (SIAMMALI Remittance) र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै ब्रुनईमा रहेका नेपालीहरुले सियामली रेमिट्यान्सको सेवा प्रयोग गरी सिटी एक्सप्रेसमार्फत अब सजिलै आफ्नो आफन्तलाई नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन् । यो सेवाबाट नेपालमा सिटी एक्सप्रेससँग आबद्ध ८५०० भन्दा बढि एजेन्टहरुबाट सजिलै भुक्तानी लिन...
फेरि बढ्यो सुनको मुल्य,तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं - सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख रुपैयाँ पार गरेको हो । यसअघि सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३ हजार ५०० सम्म पुगेर घट्दै गएकोमा बुधबार फेरि बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ९८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको...
उच्च अदातले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै लगानी बोर्डका सिइओ भट्टलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं &ndash; लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले आइतबार यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै भट्टलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलाशले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश...
काठमाडौं &ndash; आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ४ सय रुपैयाँमा कायम छ। शुक्रबार ९८ हजार ६ सयमा कारोबार भएको सुन आज २ सयले घटेको हो। आज चाँदीको मूल्य १३ सय २५ रुपैयाँमा पुगेको छ। शुक्रबार १३ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले...
जाली नोट कारोबारी अन्सारी पक्राउ
काठमाडौं &ndash; प्रहरीले जाली नोट कारोबारी इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनी पक्राउको पुष्टि गरेको छ । अन्सारी पछिल्लो १५ किलो सुनचाँदी प्रकरणमा मुछिएका छन् । अन्सारी पाकिस्तान र भारत दुवै मुलुकका लागि सूचना दिने व्यक्ति पनि हुन्...
आज पनि तोलामा ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं &ndash; मंगलबार सुनको मूल्य तोलाको एक लाख सोह्र सय पुगेको छ। सोमबार एक लाख २ हजार ४ सयमा कारोबार भएको सुन आज ८ सय रुपैयाँले घटेको हो। आज चाँदीको मूल्य १४ सय ३५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। सोमबार चाँदी १३ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार...
आज पनि सुनको मूल्यले राख्यो नयाँ रेकर्ड,तोलामा कति पुग्यो ?
काठमाडौं &ndash; लगातार बढीरहेको सुनको मूल्य आज पनि बढेर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढेर प्रतितोला एक लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो तोलामा ११ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको एक लाख २ हजार...
सुनको भाउ आज पनि बढ्यो, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं &ndash; सुनको भाउ दुई सय रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ९९ हजार ६ सय रुपैयाँमा स्थिर रहेको सुनको भाउ मंगलबार कारोबारका लागि ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको हो । आइतबार बढेको सुनको भाउ सोमबार स्थिर रहेको र मंगलबार पुनः बढेर तोलामा लाख पुग्न दुई सय रुपैयाँ कम रहेको...
आज कति पुग्यो सुनको मुल्य ?
काठमाडौं - नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य स्थिर रहेको छ । लगातार बढेको सुनको मूल्य सोमबार भने स्थिर भएको हो । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुन प्रतितोला ९९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ आइतबार पनि सुन सोहि मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।सोमबार चाँदीको भाउ भने बढेको छ ।...
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार अभियुक्त महर्जन कलंकीबाट पक्राउ
काठमाडौं - बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार राजेन्द्र कुमार महर्जन पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अनुसार कृष्णभक्त महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार महर्जन भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा ४७ वर्षीय राजेन्द्र कुमार महर्जनलाई आइतबार पक्राउ गरिएको हो । सीआईबीका अनुसार उच्च अदालत पाटनको २०७६ माघ २० गतेको फैसलाले काठमाडौं...
नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोल्ने भारतीय समाचारका च्यानल बन्द
काठमाडौं - नेपालमा भारतीय समाचार च्यानलहरुको प्रशारण बन्द गरिएको छ। च्यानल वितरक कम्पनीहरुले भारतीय समाचार च्यानलको प्रशारण आजै साँझदेखि बन्द गरेका हुन्। चीनसँग जोडेर नेपालका बारेमा अतिरञ्जित सामग्री प्रशारण गरेको भन्दै कम्पनीहरुले स्वतःस्फूर्त रुपमा त्यस्ता च्यानलको प्रशारण बन्द गर्ने निर्णय गरेको म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले जानकारी दिए। &lsquo;हामी अपरेटरहरुले सल्लाह गरेर हाम्रो...
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं - पछिल्लो समय सुनको मूल्य बढेर एकपछि अर्को गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनिरहेको छ। आइतबार पनि सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । सुनचाँदी महासंघले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूचीअनुसार आज सुनको मूल्यमा प्रति तोला ७ सय रुपैयाँ बढेको छ । योसँगै अब छापावाल सूनको मूल्य ९१ हजार ३ सय पुगेको...
अब मात्र ९ हजार सात सय ३४ रुपैयाँ मासिक किस्ता तिरे सुजुकीको कार चड्न पाहिने
काठमाडौं । नेपालका लागि सुजुकी ब्रान्डका गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले कार किन्ने ग्राहकको सपनालाई साकार बनाउने उद्देश्यले &lsquo;नयाँ सुरुवात&rsquo; नामको फाइनान्स स्किम ल्याएको छ । यो स्किम अन्तर्गत ग्राहकले न्युनतम तीन लाख ७९ हजार नौ सय रुपैयाँ डाउनमेपेन्ट तिरे सुजुकीका पेसेन्जर कार र त्यस्तै &nbsp;दुई...